Lioka 18 | Baiboly | Fandikan-tenin’ny Tontolo Vaovao
Nosoratan’i Lioka 18:1-43
Fanoharana momba an’ilay mpitondratena be fikirizana (1-8)
Ilay Fariseo sy ilay mpamory hetra (9-14)
Jesosy niaraka tamin’ny zaza (15-17)
Fanontanian’ny mpitondra iray nanan-karena (18-30)
Noresahin’i Jesosy indray hoe hovonoina ho faty izy (31-34)
Mpangataka jamba lasa nahita (35-43)
18 Ary nilaza fanoharana tamin’izy ireo i Jesosy momba ny hoe ilaina foana ny mivavaka, ka tsy ho kivy mihitsy.+ 2 Hoy izy: “Nisy mpitsara tsy natahotra an’Andriamanitra sady tsy niraharaha na iza na iza, tao amin’ny tanàna iray. 3 Ary nisy vehivavy mpitondratena koa tao. Nandeha tany aminy foana izy io, ka niteny taminy hoe: ‘Mba ataovy re izay hahazoako rariny amin’ilay miady amiko any amin’ny fitsarana e!’ 4 Tsy nety aloha ilay mpitsara nandritra ny fotoana elaela. Tatỳ aoriana anefa, dia nieritreritra izy hoe: ‘Na dia tsy matahotra an’Andriamanitra sy tsy miraharaha na iza na iza aza aho, 5 dia homeko rariny ihany io vehivavy mpitondratena io fa manelingelina ahy tsy misy farany. Amin’izay izy dia tsy ho tonga lava hangataka eto amiko eto, ka hanorisory ahy.’”+ 6 Dia hoy ny Tompo: “Henoy izany tenin’ilay mpitsara izany! Izy aza olona tsy marina nefa miteny an’izany. 7 Tsy hataon’Andriamanitra mahazo rariny tokoa ve ny olom-boafidiny izay mitaraina aminy andro aman’alina,+ na dia hoe manam-paharetana amin’izy ireo aza izy?+ 8 Lazaiko aminareo fa hataony haingana izay hanomezana rariny azy ireo. Rehefa tonga anefa ny Zanak’olona, tena hahita finoana hoatr’izany* etỳ an-tany ve izy?” 9 Nilaza an’izao fanoharana izao koa izy tamin’ireo nihevi-tena ho marina sy nanao tsinontsinona ny hafa: 10 “Nisy roa lahy niakatra nankao amin’ny tempoly mba hivavaka. Ny anankiray Fariseo ary ny anankiray mpamory hetra. 11 Dia nitsangana ilay Fariseo ka nivavaka anakampo hoe: ‘Andriamanitra ô, misaotra anao aho fa tsy mba hoatran’ny olon-kafa rehetra izay mpanao an-keriny, manao ny tsy marina, mpanitsakitsa-bady, na koa hoatran’itsy mpamory hetra itsy. 12 Mifady hanina indroa isan-kerinandro aho, ary manome ny ampahafolon’ny zava-drehetra azoko.’+ 13 Nijoro lavidavitra kosa ilay mpamory hetra, ary tsy sahy nitraka nijery ny lanitra, fa nikapo-tratra foana ka niteny hoe: ‘Andriamanitra ô, mamindrà fo amiko* mpanota.’+ 14 Lazaiko aminareo fa izany lehilahy izany no hita fa marina noho ilay Fariseo,+ rehefa nidina tany an-tranony. Fa izay manandra-tena no haetry, ary izay manetry tena no hasandratra.”+ 15 Nentin’ny olona teo amin’i Jesosy koa ny zanany kely mba hokasihiny, nefa nibedy azy ireny ny mpianatra rehefa nahita an’izany.+ 16 Nantsoin’i Jesosy hankeo aminy anefa ny zazakely, ka hoy izy: “Avelao ny zaza hanatona ahy fa aza sakanana, fa an’izay hoatr’azy ny Fanjakan’Andriamanitra.+ 17 Lazaiko marina aminareo fa tsy maintsy mandray ny Fanjakan’Andriamanitra hoatran’ny zaza ianareo, fa raha tsy izany dia tsy ho tafiditra ao mihitsy.”+ 18 Ary nisy mpitondra teo amin’ny Jiosy nanontany azy hoe: “Mpampianatra Tsara ô, inona no tsy maintsy ataoko mba handovako fiainana mandrakizay?”+ 19 Dia hoy i Jesosy: “Maninona aho no antsoinao hoe tsara? Tsy misy tsara afa-tsy iray ihany, dia Andriamanitra.+ 20 Fantatrao ny didy hoe: ‘Aza manitsakitsa-bady,+ aza mamono olona,+ aza mangalatra,+ aza mijoro ho vavolombelona mandainga.+ Hajao ny rainao sy ny reninao.’”+ 21 Dia hoy izy: “Efa narahiko daholo izany hatramin’izaho mbola kely.” 22 Hoy i Jesosy rehefa naheno an’izany: “Misy zavatra iray mbola tokony hataonao: Amidio daholo ny fanananao, ka zarao amin’ny mahantra ny vola azo amin’ilay izy, dia hanana harena any an-danitra ianao. Ary andao hanara-dia ahy.”+ 23 Nalahelo be anefa izy rehefa naheno an’izany, satria nanan-karena be.+ 24 Nijery azy i Jesosy, ary niteny hoe: “Tena ho sarotra amin’ny mpanam-bola ny hiditra ao amin’ny Fanjakan’Andriamanitra!+ 25 Mora kokoa ny hidiran’ny rameva ao amin’ny vodifanjaitra, noho ny hidiran’ny mpanankarena ao amin’ny Fanjakan’Andriamanitra.”+ 26 Ary hoy izay naheno an’izany: “Dia mety hisy ho voavonjy ve raha izany?”+ 27 Dia niteny izy hoe: “Ny zavatra tsy hain’olombelona dia hain’Andriamanitra.”+ 28 Hoy anefa i Petera: “Efa nahafoy ny fanananay izahay dia nanaraka anao.”+ 29 Dia hoy i Jesosy tamin’izy ireo: “Lazaiko marina aminareo fa tsy misy olona efa nahafoy trano, na vady, na rahalahy, na ray aman-dreny, na zanaka noho ny Fanjakan’Andriamanitra,+ 30 ka tsy hahazo be lavitra amin’izao andro izao, ary fiainana mandrakizay+ ao amin’ilay tontolo* ho avy.” 31 Dia nentiny nihataka kely izy 12 Lahy, ka hoy izy: “Miakatra ho any Jerosalema isika izao. Ary ho tanteraka daholo izay rehetra nosoratan’ny mpaminany momba ny Zanak’olona.+ 32 Hatolotra amin’ny hafa firenena,+ ohatra, izy ary hihomehezany+ sady halany baraka ary hororany.+ 33 Dia hokaravasiny ny Zanak’olona, ary avy eo dia hovonoiny ho faty.+ Hitsangana anefa izy amin’ny andro fahatelo.”+ 34 Tsy nisy azon’izy ireo anefa ny hevitr’izany. Fa nafenina taminy ny hevitr’izany teny izany, ka tsy azon’izy ireo izay zavatra nolazainy. 35 Rehefa nanakaiky an’i Jeriko i Jesosy, dia nisy lehilahy iray jamba nipetraka nangataka teo amoron-dalana.+ 36 Nandre vahoaka be nandalo ilay lehilahy, ka nanontany hoe inona no nitranga. 37 Ary hoy ny olona: “Mandalo i Jesosy avy any Nazareta!” 38 Dia niantso mafy ilay jamba hoe: “Mba iantrao aho, ry Jesosy Zanak’i Davida ô!” 39 Ary nibedy azy ny olona teny aloha sady niteny azy mba hangina, nefa vao mainka izy niantsoantso mafy hoe: “Ry Zanak’i Davida ô, mba iantrao aho!” 40 Dia nijanona i Jesosy ka nasainy nentina teo aminy ilay lehilahy. Rehefa nanatona ilay lehilahy, dia nanontany azy i Jesosy hoe: 41 “Inona no tianao hataoko aminao?” Hoy izy: “Tompo ô, mba ataovy mahita indray aho.” 42 Hoy àry i Jesosy: “Aoka ianao hahita indray! Ny finoanao no nahasitrana anao.”+ 43 Avy hatrany dia nahita ilay lehilahy, ka nanomboka nanaraka an’i Jesosy+ ary nanome voninahitra an’Andriamanitra. Dia nidera an’Andriamanitra koa ny olona rehetra nahita an’izany.+
^ Na: “an’izany finoana izany.” Abt: “finoana.”
^ Na: “iantrao aho.”
^ Na: “ao amin’ilay vanim-potoana.” Jereo F.T. “Izao tontolo izao.”